प्रकृति, संस्कृति र आत्मीयताको त्रिवेणीः टुटेपानी ! - Mardi News
प्रकृति, संस्कृति र आत्मीयताको त्रिवेणीः टुटेपानी !
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०८:०२ खड्ग जंग गुरुङ
प्रकृति, संस्कृति र आत्मीयताको त्रिवेणी हो तनहुँको भानु नगरपालिका–१३ मा पर्ने टुटेपानी गाउँ । स्वच्छ हावापानी, प्राकृतिक सौन्दर्य, अग्र्यानिक खानेकुरा, स्थानीयको सौहार्दपूर्ण व्यवहार । नेपालका प्रायः गाउँलेहरू सरल, निश्चल र सहयोगी हुन्छन् । ‘अतिथि देवो भवः’ गाउँलेहरूको व्यवहारमा मात्र पाइन्छ । त्यस्तै आत्मीयताको एउटा मुहान हो टुटेपानी गाउँ ।
गाउँलेको निश्चल हाँसो, बोली र व्यवहारले टुटेपानी गाउँ पुग्ने जो कोहीलाई लठ्ठ बनाउँछ । १२७५ मिटरको उचाईमा रहेको टुटेपानी गाउँ तनहुँको दोस्रो अग्लो डाँडा मिर्लुङकोट (१,६४५ मिटर)को दक्षिणी काखमा अवस्थित छ ।
गत सोमवार मेरो छिमेकी गाउँ जान पर्यटनविद् एवम् उपप्राध्यापक श्रीकान्त खतिवडा सरले मलाई धेरैपटक फोन गर्नुभएको रहेछ । आइतबार मात्र गाउँबाट फर्केकाले थाँती रहेका काममा सोमवार बिहान व्यवस्त भइयो । मोवाइल चार्जमा छाडेर बसेको बेला बिहान धेरैपटक फोन गर्नुभएको कुरा मिलेनियम पदमार्ग व्यवस्थापन समितिका महासचिव हर्क गुरुङले जानकारी गराउनु भयो । त्यसपछि मोवाइल हेर्दा उहाँले करिब १२/१५ पटक फोन गर्नुभएको रहेछ । मैले उहाँलाई तत्काल फोन गरें । एक बजे तयार हुन उहाँले भन्नुभयो । सोही बमोजिम एक बज्न अगावै पोखराबाट दमौलीतर्फ हामी लाग्यौं । दमौलीमा पुगेपछि पर्यटन व्यवसायी एवम् मिलेनियम पदमार्ग व्यवस्थापन समितिका महासचिव हर्क गुरुङलाई लिएर हामी टुटेपानी गाउँतर्फ लाग्यौं । कलेस्तीफाँट, गजौंडाफाँटमा पहेंलै भएर धानका बाला झुलिरहेका थिए । कतिपय ती फाँटहरूमा धान काट्दै गरेका पनि थिए । यस्ता दृश्य नियाल्दै समजुर, पोखरीछाप हुँदै हामी टुटेपानी करिब ४ बजे नै पुग्यौं ।
गाउँ प्रवेशद्वारको दायाँबायाँ महिला र पुरुषहरु स्वागतको लागि उभिएको थियो । उनीहरूले बाँसुरी र मादलको धुनसँगै फूलमालाले स्वागत गरे । पहिल्यै खबर गरेर आउने सबै खाले पाहुनालाई उनीहरूले यसरी नै स्वागत गर्दाछन् ।
हामीलाई आमा समूहद्वारा निर्मित सामुदायिक सभा हलमा पु¥याएर खाजा खुवाउनु भयो । अनि समितिका सचिव अमर गुरुङले कार्यक्रम चलाउनु भयो भने कोभिड महामारीका बेला पनि त्यहाँ हामी पुग्नुको उद्देश्यबारे पर्यटनविद् खतिवडा सरले प्रकाश पार्नुभयो । त्यहाँ जानुको मुख्य उद्देश्य घरवास कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ, त्यसको समस्या, आगामी रणनीतिलगायतको विविध विषयमा जानकारी लिन र तथ्याङ्क संकलन गर्न थियो ।
एकछिनको छलफलपछि हामी तथ्याङ्क संकलनतर्फ लागियो । १६ वटा घरबासमध्ये त्यसदिन १० वटा जतिको तथ्याङ्क संकलन गर्दा करिब ८ बजिसकेको थियो भने बाँकी भोलि बिहान पुनः सुरु गर्ने गरी खाना खानेतर्फ लाग्यौं । खाना खाइसक्दा ९ बजिसकेको थियो । पुनः सभाहलमा भेलाभई हामी उनीहरुको नाचगान हेर्नतर्फ लाग्यौं । सामुदायिक भवनको सभाकक्ष अघिल्तिर स्वागत गीत सुरु भयो-
प्रकृतिले हराभरा टुटेपानी गाउँ ।
यो गीतमा छमछमी नाचे दुई युवती । नृत्य आकर्षक थियो । गीतमै पाहुनाको स्वागत र गाउँको परिचय र प्रवर्द्धन पनि ! उनीहरूले चुड्का, पाउँदुरे (कृष्णचरित्र), ठेटर र घाटु लगायतका नाच देखाए ।
नाचगानपछि हामी ५ जना दुई घरमा बाँडिएर सुत्यौं । बिहानचाहिं ५ बज्नु अघि नै हामी उठिसकेका थियौं । सबेरै हामी सूर्योदय हेर्न सनसरी डाँडामा निर्माण भएको भ्यूटावरतर्फ लाग्यौं । त्यहाँ पञ्चायतले ०१८ सालमा हत्या गरेका सहिद कृष्णबहादुर गुरुङको सालिक पनि छ । प्रजातन्त्रवादी योद्धा कृष्णबहादुरको सालिकसामु मुन्टो झुकायौं हामीले ।
सूर्योदयसँगै भ्यूटावरबाट हामीले गाउँलाई खिच्यौं । अनि तनहुँ जिल्लाको दोस्रो अग्लो शिखर मिर्लुङकोटतर्फ लाग्यौं । रानीपोखरीसम्मको जीप यात्रा पछि करिब १५/२० मिनेटको पैदलयात्रा गरेर मिर्लुङकोट पुगियो । टेलिफोन टावर निर्माणले त्यहाँ भएको भग्नावशेषलाई नष्ट गरिसकेका रहेछन् । त्यहाँबाट देखिने दर्जनौं हिमाल नियाले । त्यसदिन बादलले धेरै हिमाल छेकेतापनि अन्नपूर्ण, हिमचुली, माछापुच्छ्रे देखि लमजुङ र गणेश हिमालसम्म प्रष्टै देखिएको थियो । केहीवेर मैले त्यतै क्यामेरा सोझ्याइरहें ।
हिमाल हेर्दै हामी तल झ¥यौं त्यहाँको शक्तिपीठ भँयरथानमा । त्यहाँ पुगेर दर्शन गरि हामी जीप चढ्दै बयापानी भञ्ज्याङ पुगियो । मिर्लुङकोटबाट देखिने नाउँदीफाँट बाक्लो जंगल र टेलिफोन टावर निर्माणका कारण हेर्न नसकिएका दृश्य बयापानी भञ्ज्याङबाट नियाल्दै पुनः टुटेपानी फर्कियौं । त्यसबेला बिहानको ९ बज्न थालिसकेको थियो । बिहानको खाजा खाँदै पुनः बाँकी काममा जुट्यौं । केही छोटो समयको वावजुद हामीले आप्mनो काम सम्पन्न ग¥यौं । खाना खाएपछि हामी सरासर ठूलो ढुंगामा पुग्यौं । विशाल ढुंगामाथि रूखै रूख छ त्यहाँ । ढुंगाभित्र सिद्ध गुफा । तर विडम्बना त्यस गुफाको अध्ययन नै हुन सकेको छैन । पुनः हामी टुटेपानी फर्कियौं र छोटो औपचारिक कार्यक्रमपछि हामी फर्किने तयारी भयो । मानो खाई मुरी भित्र्याउने समय भएकाले सकेसम्म छिटो खाना खाई फर्किने हाम्रो योजनाअनुसार हामी बाटोमा निस्कँदा टुटेपानीका दिदीबहिनीहरूले गीत गुन्जाए । गीत निकै मन छुने थियो । लाग्छ, अझै पनि मनको कुनै कुनामा ध्वनित भइरहेकै छ —
मनको कुरा फोनमा गरूँला ।’
हामी बिदा मागी ग्रामीण पर्यावरणमा रम्दै, गफिँदै १५ मिनेटको यात्रापछि पुलिमराङ गाउँको सहिदपार्क पुग्यौँ । देशमा पटकपटक राजनीतिक व्यवस्थाहरू त परिवर्तन भए तर मेरो गाउँ पुलिमराङको अवस्था अझै उस्तै छ । पुलिङमराङ गाउँको जस्तो अवस्था नेपालमा धेरै छ । राज्यको नजरबाट कहिलेसम्म उपेक्षाको शिकार भइरहने होलान् हाम्रा गाउँहरू? लोकतन्त्रका लागि सहादत दिने सहिदहरूको गाउँमा पुग्दा जो कोहीको पनि मन भक्कानिन्छ ।
व्यास नगरपालिकाको वडा नं ८ मा रहेको मेरो पुलिमराङ गाउँलाई सहिदहरूको गाउँका रूपमा चिनिन्छ । एकै गाउँका ६ जना योद्धाले वि.सं. २००७ को क्रान्ति र वि.सं. २०१८ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्दा सहादत पाएका थिए । यिनै छ जना सहिदहरू धर्मध्वज गुरुङ, लालध्वज गुरुङ, हस्तवीर गुरुङ, सर्वसिंह गुरुङ, शम्शेरबहादुर गुरुङ र भरत गुरुङको प्रतिमा लहरै बनाइएका छन् यो पार्कमा । २०५१ सालमा शिलान्यास गरिएको उक्त पार्क गत वर्षको सहिद दिवसमा मात्र उद्घाटन गरिएको छ । लाखौं विन्ती गरेर प्राप्त गरेको चुबुर चुबुर बजेटले भएको निर्माण र पार्कको अवस्था हेर्दा त्यहाँ पुग्ने जो कोहीले सहजै अनुमान गर्छन् यो त सहिदप्रति अपमान भयो कि? भन्ने ।
केहीछिनको पार्क अवलोकन पछि हामी रिस्ती खोला, सोतीपसल, दुईपिप्ले– पोल्याङटार–देउराली हुँदै अर्को पर्यटकीय गाउँ दगाम पुग्यौं । त्यसदिन त्यहीँ बासबसी टुटेपानीमा जस्तै तथ्याङ्क संकलन गरी सुत्ने बेलामा रातको ११ः३० हुन लागिसकेको थियो ।
छोटकरीमा मिर्लुङ सेरोफेरोः
पर्यटकीयको अथाह सम्भावना भएको ठाउँ हो मिर्लुङ सेरोफेरो । खिचिरहुँझैं लाग्ने प्रेमिल दृश्य अपार छन् । विशाल ढुंगामाथि रूखै रूख र त्यस ढुंगाभित्र भएको सिद्ध गुफाको चर्चा बाहिर ल्याउन सकेको छैन । मिर्लुङकोटमा प्राचीन दरबारका भग्नावशेष, भयँरथान, बाघको खोर, रानीपोखरी लगायत सम्पदा छन् । धार्मिक सहिष्णुता बोकेको यस क्षेत्रमा दर्गा जामे मस्जिद पनि छन् । साँस्कृतिक धरोहरहरु धेरै छन् । जाडो सिजनमा गाउँबाट तल हेर्दा ‘व्हाइट लेक’ देखिन्छ । त्यस ठाउँमा पुग्नुपर्दा दुई रात बस्ने गरी यात्राको योजना बनाउनु अझ बेस हुन्छ ।
कसरी पुग्ने ः दमौलीबाट उत्तरमा टुटेपानी । पृथ्वीराजमार्गको डुम्रे र दमौलीबाट टुटेपानी जाने थुप्रै सडक छन् । दमौलीबाट छापथोक–गौरीस्वाँरा–पोखेरीछाप हुँदै २४ किमीको यात्रा पछि टुटेपानी गाउँ पुग्न सकिन्छ । त्यसैगरी दमौली–कलेस्ती, समजुर–पोखरीछाप–टुटेपानी २२ किमी यात्रा र डुम्रे–सेपा बगैंचा–समजुर–पोखरीछाप–हुँदै करिब २५ किमीको यात्रा गरेपछि पनि टुटेपानी पुग्न सकिन्छ । त्यसैगरी डुम्रे–तुरतुरे–कालीमाटी–ढाँडफेदी–पुलिमराङ गाउँ हुँदै पनि पुग्न सकिने बाटो छ भने पोखरा–देउराली–दुईपिप्ले–सोतीपसल–पुलिमराङ हुँदै करिब ६५ किमीको यात्रापछि टुटेपानी गाउँ पुग्न सकिन्छ । खासगरी दमौलीबाट मध्यान्ह १२ बजे र दिउँसो २ बजे टुटेपानी पुग्ने बस पाइन्छ भने डुम्रेबाट दिउसो १ः ३० बजे छुट्ने बसमा चढ्न सकिन्छ ।
Previous सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण सम्बन्ध सुधारमा फलदायी भएको छ : नेपाली सेना
Next गणतन्त्रको बिचल्ली
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १३ सय ४ कोरोना संक्रमित, २१ को मृत्यु
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १६:३८ मर्दी न्यूज
बालुवाटारमा सुरू भयो नेकपा सचिवालय बैठक
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १३:४७ मर्दी न्यूज